भारतबाट आएका हजार जना आफ्नै घरमा , काेराेन संक्रमणकाे खतरा ! - Rajdhani Daily News
Home Editor-Picks भारतबाट आएका हजार जना आफ्नै घरमा , काेराेन संक्रमणकाे खतरा !
दार्चुला । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन यहाँक ११ वटै पालिकाले अपनाएको उच्च सतर्कतामा चुनौती थपिएको छ । भारतलगायत विदेशका अन्य मुलुकबाट गृह जिल्ला दैलेख प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या एक हजार सय ५६ पुगेपछि सतर्कतामा चुनौती बढेको हो । भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट गृह जिल्ला दैलेख आएकामध्ये २३६ जनालाई मात्र क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । एक हजार २१३ जना आआफ्नै घरमा बसेका छन् । घरमा बसेका उहाँहरूलाई सतर्कता अपनाउन भनिएको छ ।
डुंगेुश्वर गाउँपालिकाले कोरोनाविरुद्ध लड्न रु २५ लाखको राहत कोष स्थापना गर्ने भएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम पालिकामा औषधि खरिद गर्न, शंकास्पद बिरामी फेला परेमाा सुर्खेतसम्म पठाउन तथा क्वारेन्टाइन निर्माणमा खर्च गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्लले बताए ।